Shacab ku dhintay Qarax haleelay Gaari ay la socdeen! | Banaadir Times
HomeUncategorisedShacab ku dhintay Qarax haleelay Gaari ay la socdeen!
Shacab ku dhintay Qarax haleelay Gaari ay la socdeen!
DG Jubbaland ayaa sheegtay in ay wax ka qabaneyso qaraxyada miinooyinka oo welwel badan ku beeray dadka shacabka ah ee isaga kala gudba Degmooyinka Gobolka Jubada hoose oo haatan qarka u saaran in ay joojiyaan sabab la xiriirta dhibaatada ay kala kulmayaan.
Previous articleGuddiga kala dhiman ee Doorashooyinka oo diyaariyay Goobaha Doorashada.
Next articleAskar katirsan Ciidanka Uganda oo Billad lagu siiyay howlgalkooda Soomaaliya.